Akarovesa mombe 20 nemheni | Kwayedza
24 Jan, 2020 - 00:01	 2020-01-23T13:48:57+00:00 2020-01-24T00:06:52+00:00 0 Views
Mombe dzinonzi dzakaroveswa nemheni
Freedom Mupanedemo ari kuGokwe
MURUME wekwaMambo Njelele, kuGokwe, ari kutiza kumira pamberi pedare ramambo weko nemhosva yaari kupomerwa yekutumira mheni iyo yakanouraya mombe 20 dzevavakidzani vake vaviri mushure mekunge vamunyima mombe dzekuti arimise mumunda make.
Mukubuda kwenyaya iyi, zvinonzi Raymond Masvimbo (64) anogara mubhuku raGanda akaenda kuvavakidzani vake mushure mekunge mvura yanaya achikumbira kuti vamupe mombe dzekurimisa, asi akanyimwa ndokubva azodzirovesa nemheni.
Mambo Njelele vanotsinhira nyaya iyi vachiti vavakidzani vaMasvimbo vanonzi vakaramba nemombe dzavo apo akabva avavimbisa kuti dzose dzaizofa kuti vafanane. “Mushure memavhiki maviri anyimwa mombe dzekurimisa, zvinonzi pakangoita gore dema muchadenga, ndokubva paita mheni yaityisa iyo yakauraya mombe makumi maviri dzemhuri mbiri idzo dzainge dzaramba kupa Masvimbo kuti abaye muforo mumunda make,” vanodaro Mambo Njelele.
Vanoti nyaya iyi yakazokwidzwa kudare ravo ivo ndokutara zuva rekuti igotanga kutongwa kuti Masvimbo apindure mhosva yaari kupomerwa yekurovesa mombe idzi nemheni.
“Musi wedare wasvika, Masvimbo haana kuuya apo pandakazotuma nhume yangu kumba kwake tikazoziva kuti ainge atiza akanopotera kwaMambo Nemangwe.
“Tichiri mubishi rekuti timuunze mudare,” vanoenderera mberi Mambo Njelele.
Vanoti vakazoenda kunoona mombe dzainge dzauraiwa nemheni vakaudza varidzi vadzo kuti vadzipise.
“Pakaita kurasikirwa kukuru, nanhasi vanhu mudunhu ingori nyaya yekuti mheni iyi yakamboita sei inorova kusinganaye?” vanodaro mambo.
Masvimbo paakataurwa naye panhare neKwayedza anoramba nyaya iyi asi ndokuti akatiza munzvimbo mavo nekuti akange otya kurohwa nevanhu nekuda kwemhosva yaari kupomerwa yekurovesa zvipfuyo zvevaridzi nemheni.